ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း ပထမသုံးလပတ်တွင် မြင့်တက် - Xinhua News Agency
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း ပထမသုံးလပတ်တွင် မြင့်တက်
ဘန်ကောက် ၊ မေ ၂၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်တွင် ၁ ဒသမ ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းထိ သိသိသာသာ တိုးလာခဲ့ပြီး အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေသည် ၇၆၀,၀၀၀ ဦးထိ ရှိခဲ့ကြောင်း မေ ၂၄ ရက်တွင် အမျိုးသား စီးပွားရေး နှင့် လူမူရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကောင်စီ(NESDC) ရုံး၏ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စတုတ္ထပတ် အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည် ၁ ဒသမ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း ဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၏ ပထမသုံးလပတ်အတွင်း လုပ်သားအင်အားသည် ၃၈.၈ သန်းအထိ ရှိခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေးကဲ့သို့ လုပ်ငန်းအချို့တွင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်က အလုပ်ပြုတ်သူအချို့ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများရရှိခဲ့ကြောင်း ၊ ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကဲ့သို့ အခြားလုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်အကိုင်များစွာ ပျောက်ကွယ်ခဲ့ကြောင်း NESDC အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။
အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည် COVID-19 ရောဂါ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော သက်ရောက်မှုများကြောင့် တစ်ဖန်မြင့်တက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ (MSMEs)ရှိ အလုပ်သမားများသည် ကူးစက်ရောဂါကို လျင်မြန်စွာ မထိန်းချုပ်နိုင်ပါက ၎င်းတို့၏ အလုပ်ချိန်များ လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင် ဆုံးရှုံးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့က ယင်းလုပ်ငန်းသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ်မတိုင်မီ လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း တွက်ဆထားပြီး အလုပ်သမား ၇ သန်းကျော် ထိခိုက်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
နိုင်ငံစီးပွားရေးပေါ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါသက်ရောက်မှု နှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု နှေးကွေးခြင်းသည် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရသူ ၄၉၀,၀၀၀ ဦးအပေါ် အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ ထပ်မံအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ (Xinhua)
In some industries such as agriculture, jobs have been created due to recovery and hence absorbing some of the lay-offs from last year, while in other industries like tourism and manufacturing, more jobs have disappeared, the NESDC report said.
The unemployment rate is expected to rise again in light of the ongoing impact of COVID-19, according to the report.
Employees in micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) are being expected to lose jobs or have their working hours cut if the pandemic can not be quickly contained, the report said.
Also, more lay-offs in the tourism industry are forecasted since the Tourism Authority of Thailand predicts that the industry will not recover before 2026, which will affect over7million workers.
The impact of the coronavirus on the national economy and its slower economic growth will further affect the employment of 490,000 university graduates, the report said. Enditem
ကွာလာလမ်ပူမြို့တွင် ရထားတိုက်မှုကြောင့် လူ ၂၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရ